လိုရာဆွဲတွေးသူများသို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လိုရာဆွဲတွေးသူများသို့
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Mar 21, 2016 in Creative Writing, Critic, Think Different | 12 comments
လူဟူသည် ကွဲပြားခြားနားခြင်း ကို စိတ်ဝင်စားသည်။ မတူသည့်အရာကို စူးစမ်းချင်သည်။ အထူးအဆန်းဆိုသည်ကိုမှ စမ်းသပ်ကြည့်ချင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ခရီးသွားခြင်းဟူသည့်အရာ ဖြစ်ပေါ်လာရပေသည်။ မိမိနေထိုင်ရာဒေသ၏ အပြင်ဘက်ကို ခဏထွက်ကြည့်ကြသည်။ မတူညီသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခံစားသည်။ မတူညီသည့် ဓလေ့စရိုက်များကို လေ့လာသည်။ အခါအခွင့် ကြုံကြိုက်လျှင် ထိုဓလေ့စရိုက်များနှင့် ခေတ္တအသားကျလိုကြသည်။ ဤကား လူသားတို့၏ ပင်ကိုစိတ်သဘောထားပေတည်။
သင်ကိုယ်တိုင်သည်ပင် လူသားထဲမှ လူသားတစ်ဦးဖြစ်သည့်အတွက် ထိုသို့သော စိတ်သဘောထားရှိနေမည်မှာ မလွဲဧကန်ပင် ဖြစ်ပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ သင်သည် မြေပြန့်ဒေသတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပါက တောင်ပေါ်ဒေသများနှင့် ပင်လယ်ကမ်းခြေများသို့ ခရီးသွားလိုပေလိမ့်မည်။ အပူပိုင်းဒေသတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပါက နှင်းတောင်ဒေသများသို့ သွားလည်ချင်ပေလိမ့်မည်။ ကုန်ကုန်ပြောရလျှင် သင်သည် ဗမာလူမျိုးဖြစ်နေပါက အခြားတိုင်းရင်းသားတို့၏ ဓလေ့ထုံးစံများကို စိတ်ဝင်စားပေလိမ့်မည်။ တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံများကို ဝတ်ဆင်ကြည့်ချင်မည်။ တိုင်းရင်းသားအစားအစာများကို မြည်းစမ်းကြည့်ချင်မည်။ ထိုအရာများကို လုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါကလည်း သင့်ဘဝ၏ အမှတ်တရအဖြစ် မှတ်တမ်းထင်ထားလိမ့်မည်။ ဤကား ရိုးရှင်းသောအရာတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်ပြောချင်သောအရာကား ဤနေရာမှ စပေသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ သွားလည်သည် ဆိုပါစို့။ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုအဆောက်အအုံများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်မည်။ ကိုရီးယားဝတ်စုံဝတ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်မည်။ ကိုရီးယားဂင်မ်ချီကို ကိုယ်တိုင်စမ်းလုပ်ကြည့်မည်။
အကယ်၍ ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတို့က ကိုရီးယားဝတ်စုံဝတ်ထားသော သင့်ဓာတ်ပုံနှင့် ဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် စကတ်တို၊ ဘောင်းဘီတို၊ ရေကူးဝတ်စုံများဖြင့် သရုပ်ဆောင်ထားသော မင်းသမီးပုံများ (သို့မဟုတ်) ကိုရီးယားပြည်သူပုံများ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ နိုင်ငံခြားသားများက ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းကြပြီး ကိုရီးယားလူမျိုးများက နိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမှုကို အထင်ကြီးနေကြသည်ဟု ရေးသားကြအံ့။ သင်မည်သို့ ခံစားရမည်နည်း။
ထို့ကြောင့် ရိုးရှင်းလှသော အချို့အရာများကို လိုရာဆွဲတွေးခံစားခြင်းဖြင့် မိမိလူမျိုးများကို သိက္ခာကျစေသောအဖြစ်မှ ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ.. ။
ဟိ.. ထိ… မိ…
ရေတွင်းး အဆိပ်ခတ်သော အတွေးးမျိုးးများးမှ လွတ်မြောက် နိုင်ကြပါဇီ.. ???
ဝါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းရမ်းတတ်သော အယူအဆ များးမှ လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါဇီ.. ???
လွန်လွန်ကဲကဲ ဝတ်စားနေသူတွေ ရှိတာ လက်ခံပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အကုန်လုံးကို ဝါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းရမ်းပြီး ကိုယ့်လူမျိုးကို နှိမ့်ချနေတာ အတော်အမြင်ကတ်တယ်…
ကိုယ်​လိုရာကို ဆွဲ​တွေး​နေရင်​ တစ်​၀က်​​တော့မှန်​လိမ့်​မယ်​ ××××× မ​ကျေနပ်​ဖူး ×× မ​ကျေနပ်​ဖူး ×××× ငါအချစ်​ဆုံးသူ တစ်​​ယောက်​ထဲဆိုတာ မင်းမသိဖူး မှုတ်​လား ××××
ကိုဘလက်​ကြီး​ခေါ်ပြီး ဂစ်​တာတီးခိုင်းရ​ကောင်​မား တိဖူးရယ်​
ဟိ.. အာ့ ဘူ့သီချင်းတုန်း..
စမီးတို့ခေတ် မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်..
အဘတို့လည်း ရောက်သမျှနိုင်ငံမှာ ၊
သူ့အဝတ်လေးဝတ် ၊ သူ့အစာလေးစားခဲ့ ( စမ်းခဲ့ ) တာဘဲ ။
ပြီးရင် ( ယဉ်ကျေးမှု အရ ) ကောင်းတယ် ကြိုက်တယ် ပြောခဲ့တာဘဲ ။
အဲ့ဒဟာကြီးကို အသေယုံနေကြရင်တော့ ၊ တုံးပါ့ဟယ် ။
နိုင်ငံခြားသားတွေ မြန်မာဝတ်စုံဝတ်တိုင်း အဟုတ်ကြီးမှတ်နေကြတာ.. စိတ်ကုန်တယ်…
ပိုက်ဆံနဲ့တိုင်းတာပါ…။ ပိုက်ဆံဟာ မမြင်ရတာတချို့ကို မြင်သာအောင်လုပ်ပေးတဲ့ ယူနစ်တခုပါ..
တခြားလူမျိုးတွေ.. ကိုရီးယားဝတ်စုံဝတ်ကြရင်… ကိုရီးယားစီးပွားရေးတက်မယ်..။
အမျိုး..။ ဘာသာ၊ သာသနာအော်မယ်..။
လိုက်လုပ်သူလေးစားလိုက်နာသူတွေရှိရင်.. အော်ပေး တိုင်ပေးတဲ့သူတွေ.. အလှူငွေရမယ်..။
ဆြာတွေ.. အလုပ်မလုပ်ရပဲ.. ပါးစပ်ကလေးနဲ့.. ဘ၀ရပ်တည်လို့ရမယ်…
စီးပွားတက်မတက် အယုံအကြည်တော့ မရှိပေမယ့်.. ကိုယ်သာဆိုလည်း ဝတ်ကြည့်ခဲ့မှာပဲ…
ကယားဝတ်စုံတောင် ဝတ်ကြည့်ချင်ခဲ့တာ.. ဟိဟိ.. မကောင်းတတ်လို့…
မဘသ ဆိုတာတော့ အတော်စိတ်ကုန်တဲ့အထဲမှာ ပါတယ်… ဘရိန်းဝက်ရ်ှခံထားရတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေ…
ရခိုင်တစ်ဝက် ဗမာတစ်ဝက် ကပြား ကျနော်
ကရင်ပြည်နယ်ကိုချစ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်မှာ နေထိုင်ချင်သူ
ရှမ်းအစားအစာတွေကြိုက်ပြီး ကချင်ပုဆိုးကို အမြဲဝတ်ဆင်သူ. . .
နိကို တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ခန့်ဖို့ အဆိုတင်သွင်းပေးမယ်…
ရှာကြံ အပြစ်ပြောတတ်တဲ့နေရာမှာ နာဒို့တွေ ပထမ ပါဆို
အေးဆို… ကိုယ့်ကိုကို အကောင်းတွေးတဲ့နေရာမှာလည်း နှစ်ယောက်မရှိဘူး..